အင်အားအကြီးမားဆုံးစွမ်းရည် – Interpretability | Mycanvas
အင်အားအကြီးမားဆုံးစွမ်းရည် – Interpretability
ဒီစွမ်းရည်ဟာ သင့်ရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ အလုပ်အများစုအပြင် သင့်ဘဝကိုတောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သင်ဘာဖြစ်ချင်တယ်၊ ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သင်ပြောချင်တဲ့အရာတွေကိုအလွယ်တကူပြောနိုင်မယ့်စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် သင်ပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အကျဉ်းချုပ်ပြီးလိုရင်တိုရှင်းပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစွမ်းရည်ကို “အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူနိုင်ခြင်းစွမ်းရည်” လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြသွားသလိုပဲ သင်တစ်စုံတစ်ခုကိုမပြောခင်မှာသင့်ရဲ့အကျဉ်းချုပ်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လေ့ကျင့်လိုက်ရအောင်!
ပထမဦးစွာ Myanmar Times (သို့) မဇ္ဈိမ စတဲ့ သတင်းမီဒီယာများမှသတင်းများကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်၊ သတင်းမှာပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုရွေးချယ်ပြီး မှတ်ချက်များဖြင့် သင့်ရဲ့ Facebook ပေါ်တွင် Share ပါ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီးကြိုးစားနိုင်ရင်တော့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကို သင့်ရဲ့ Share Post မှာ ထည့်ရေးလို့ရပါတယ်။ သင်အနှစ်ချုပ်ရေးရန်ယုံကြည်မှုမရှိပါက၊ သင်ရဲ့စာဖတ်စွမ်းရည်ကိုအရင်မြှင့်တင်သင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့စာဖတ်စွမ်းရည်တိုးတက်လေလေ၊ သင့်ရဲ့ Interpretability စွမ်းရည်ကောင်းလာလေလေဖြစ်ပါတယ်။
1. သင့်ရဲ့အတွေးကို စကားလုံးများအဖြစ်မပြောလိုက်ပါနဲ့
၃။ သင်ရော တခြားသူ‌ရော နှစ်ဦးစလုံးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကောင်းတဲ့အရာများကိုပြောပါ
အထက်အချက်များကိုသင်အာရုံစိုက်ပါက သင့်အတွက်သာ ပြောဆိုခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်စုံတစ်ဦး က သူတို့အတွက်ရရှိနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုနားလည်သည်နှင့်တပြိုင်နက် သင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်ကို သူ့အလိုလိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။